Voasarimakirana ny akondro sy ronono: tombontsoa sy ny fomba fanomanana azy | Sakafo Nutri
ny ronono akondro nentim-paharazana amin'ny fomba amam-panao amin'ny kolontsaina maro eto an-tany, maneho snack tena mahavelona, ​​izay mitatitra ihany tombontsoa tena mahasalama.
1 Tombontsoa azo avy amin'ny malama sy ronono
2 Ahoana ny fanomanana ny malama sy akondro
2.1 Akora ilaina amin'ny malama:
3 Kaloria avy amin'ny ronono akondro
4 Mampananatavy anao ve ny akondro sy ny ronono?
5 Azo ampiasaina amin'ny fikarakarana azy ve ny karazana ronono hafa?
Tombontsoa azo avy amin'ny malama sy ronono
Ny ronono, tsy toy ny akondro, dia heverina fa manana karazana proteinina feno kokoa amin'ny fananana sivy amin'ireo asidra amine tena ilaina na ilain'ny vatana satria tsy vitany ny mamorona azy ireo, raha jerena fa amin'ny ankapobeny dia misy asidra amine roapolo eo ho eo ampiasain'ny vatana hamita ny asany amin'ity ambaratonga ity.
Ny asidra amine manan-danja sivy omen'ity sakafo ity dia; isoleucine, histidine, leucine, methionine, valine, tryptophan, threonine, lysine, ary phenylalanine.
Ny akondro antonony iray dia manome proteinina 1,29 grama, raha ampitahaina amin'ny kapoaky ny ronono skim Manome proteinina 8.26 grama eo ho eo izy, na izany aza, ny akondro dia manome ireo otrikaina ireo amin'ny vola kely, nefa manampy tsara ny proteinina manontolo.
Ampidiro amin'ny mivelona amin'ny vola fanampiana Ny sakafo miorina amin'ny zavamaniry izay misy proteinina dia safidy voajanahary tsara handanjalanjana ny vokatra hena izay manankarena amin'ny tavy tototry ny tsy fahasalamana, eo amin'ireo legioma sy voankazo manan-karena proteinina hitantsika; akondro, legume ary ahidrano, izay afaka manampy mameno ny asidra amine ilaina rehetra.
Sakafo proteinina avo
Ny fanao amin'ny fampifangaroana ny akondro amin'ny ronono dia manome tombony amin'ny proteinina iray manontolo, ary koa fibre, calcium ary potasioma, Ireo otrikaina tena ilaina amin'ny fahasalamana tsara, raha fintinina ny fitambaran-dronono sy ny hanina akondro dia mahazo proteinina 9,55 grama ianao.
Manana isa; Ny olon-dehibe dia mila proteinina 46 ka hatramin'ny 56 grama isan'andro, miankina amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, fa ny ankamaroan'ny olona mahazo mihoatra ny soso-kevitra proteinina, izay tena sarotra ny tsy fananany.
Ahoana ny fanomanana ny malama sy akondro
Misy karazany maro ny malama vita amin'ny ronono. Izahay dia mijery ny iray amin'ireo kilasika, mihozongozona ny akondro sy ronono. Amin'ny fahatongavan'ny hafanana dia maniry kokoa ny handany azy ireo na dia lavorary aza izy ireo mandritra ny taona.
Ity milkshake ity tianay satria mora be ny fanomanana azy ary milamina sy mamy ny tsirony. Izay tia ny tsiron'ny akondro dia ho azy ireo zava-pisotro ankafizinao.
Akora ilaina amin'ny malama:
Ronono 250 milliliter
ranomandry voatoto (tsy voatery)
Ianao dia mila ny fanampian'ny mixer elektrika na sandry mixeur. Ampidiro ireo fangaro ary kapohina tsara mandra-pilamina. ary tsy misy pulp. Azonao atao ny manampy ranomandry voatoto raha te handany azy ianao rehefa mangatsiaka. Raha tsy izany dia azonao atao ny mitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana. Na dia mamporisika anay handany azy eo noho eo aza izahay.
Ny singa samihafa dia azo ampiana amin'ity karazam-peo ity ka miovaova ny tsy fitovizany na ny tsirony, handravahana azy amin'ny sôkôla sôkôla, mamafa siramamy am-boasary, fanosotra nokapohina na nofongaranao tamin'ny cookies roa.
Kaloria avy amin'ny ronono akondro
Rehefa maheno ilay teny hoe malama isika dia mieritreritra mivantana ny habetsaky ny kaloria tokony hananan'io zava-pisotro matsiro io. Raha izany dia, ity fikororohana ity dia mety ho iray amin'ireo kaloria indrindra izay azontsika atao ao an-trano.
Ny kaloria ao amin'ity fanetsehana ity dia avy amin'ny gliosida, proteinina ary tavy amin'ireo akora roa ireo. Miankina amin'ny lalàm-panorenanao sy ny metabolismanao no handevonanao an'io karazana fikororohana io amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Tombanana ho akon'ny akondro sy ronono mahazatra manana kaloria 250 eo ho eo. Hiankina amin'ny karazana akondro izay ampiasaina mitovy amin'ny karazana ronono foana izy io, tsy mitovy ny mampiasa a akondro mahazatra izany 170 kaloria isaky ny 100 grama noho ny akondro lahy manana kaloria 95 isaky ny 100 grama. Etsy ankilany, hojerentsika izany a ronono iray vera dia manome kaloria 150 ary ny vera skim na ronono skim dia manana kaloria 80.
Mampananatavy anao ve ny akondro sy ny ronono?
Betsaka ny olona no mihevitra fa ity karazan-tsofina ity dia ilaina amin'ny fahazoana lanja sy fahaverezana hozatra raha toa ianao ka eo am-piofanana mafy.
Tsy tena lavitra be ny milaza fa hampihetsiketsika antsika ity fihororohana ity, raha laniana tsy tapaka sy amin'ny habetsany be dia hanamora ny lanjantsika izany.
Ny sakafo dia navadika ho angovo ary tsy maintsy mampiasa angovo isika handresena ny fiainantsika isan'andro, raha mihinana betsaka mihoatra ny lanintsika isika, tsy maninona izay sakafo laninao satria hanomboka hitahiry tahiry ny vatanao ary hahazoanao lanja
Manimba ve ny sakafo proteinina avo?
Na eo aza ny kaloria, malama malama tena mahasalama ny vatana izany. Salama ny akondro ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo maro. Fantatra tsara izany atleta Izy ireo dia mihinana izany mba hamerenana amin'ny laoniny ny mineraly sy vitamina ampiasaina amin'ny asany ara-batana, noho izany, mandany akondro iray ka hatramin'ny roa izy ireo mba ho sitrana. Noho io antony io, ny savony sy ny ronono vita amin'ny ronono dia natao ihany koa mba ho salama hatrany.
Azo ampiasaina amin'ny fikarakarana azy ve ny karazana ronono hafa?
Androany izay iarahan'ny olona omnivorous, vegetarian, vegan, vegan vao ary lisitra lava misy safidy sakafo, afaka mahita fomba samihafa hiomanana isika malama ity avy amin'ny karazana ronono isan-karazany.
Ny malaza indrindra dia ny Ronono soja, safidy mety hanolo ny rononon'omby. Ny ronono soja dia manan-karena asidra amine ilaina, mety tsara amin'ny fivelarana tsara. Ho fanampin'izay, manome be dia be ny proteinina, tsy manana kolesterola ary be vitamina sy mineraly.
Etsy ankilany, ho an'ny nify mamy sy mamy indrindra azon'izy ireo sahy arotsaho ny ronono mihoampampana hozongozonina. Io no hampisondrotra ny malama anao vitamina karazana A, C, D. ary ny vondrona rehetra B.
Ny ronono mihoampampana dia iray izay nandalo fizotran'ny ronono omby very ny rano rehetra avy eo nampiana siramamy. Misaotra an'izany, tratrarina ny matevina.
Vokatra manankarena kalsioma, fosfor ary zinc izay manome glucose sy lactose avo lenta.
Farany, azonao atao koa ny manamboatra azy amin'ny voaniho, io fikitika tropikaly sy exotic io izay hanome azy mamy sy hanitra matsiro.
Mba hanaovana izany dia tsy mila manova ny refin'ny rononon'omby ho an'ny ronono voanio fotsiny ianao. Ronono voanio Vonona amin'ny hena fotsy amin'ny voanio masaka io, torotoro izy ka tonga fisotro matsiro sy mahavelona. Azontsika atao ny mividy azy amin'ny fivarotana efa voaomana na mamporisika ny tenantsika hanao izany ao an-trano.
Ny ronono voanio dia misy ny vitamina an'ny vondrona B sy vitamina C. Ho fanampin'izay, manankarena izany dia potasioma, phosphore, selenium ary maneziôma. Ankoatr'izay dia tsara ho an'ny taolantsika io satria misy calcium.
Etsy ankilany, tsy manome fructose fa siramamy 2%, mety ho an'ireo tsy mahazaka laktose rehetra ireo, manan-karena tavy polyunsaturated sy tototry.
Sakafo be proteinina be tavy
Ity fanetsiketsehana ity dia manome antsika karazan-karazany maro ao aminy, izy rehetra ireo dia manome antsika tombony lehibe ho an'ny vatantsika. Raha tsy afaka manapa-kevitra momba ny malama ianao, dia manoro hevitra anao izahay mba handray an-tsoratra ary hanomana ny malama sy akanjonao akondro sy ronono anio. Amin'ny singa roa fotsiny dia afaka mankafy zava-pisotro matsiro ianao fa hitia ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Mahafandeha akondro sy ronono
tompoko x dia hoy izy:
Impiry no ampirisihina ianao hisotro an'io shake io?
Mamaly an'i Mister x